» कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा ८ देखि १२ हप्ता कायम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञहरुको प्रस्ताव
कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा ८ देखि १२ हप्ता कायम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञहरुको प्रस्ताव
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप पहिलो मात्रा लगाएको २८ दिनमा दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने निर्णय गरेपनि कोभिड-१९ खोप प्राविधिक सल्लाहकार समितिले भने दोस्रो मात्रा ८ देखि १२ हप्ताको अवधिमा लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयले खोपको अवधी २८ दिनको फरकमा हुने गरि सर्कुलर गरिसकेको अवस्थामा सल्लाहकार समितिको बैठकले दोस्रो मात्रा ८ देखि १२ हप्ताको अवधिमा दिन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले गरेको प्रस्ताव निर्णयका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेस गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले बताएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको खोप सम्बन्धी विज्ञहरुको समिति (सेज)ले गरेको निर्णयको आधारमा सल्लाहकार समितिले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यस अघि सेजले पहिलो खोप लगाएको ८ देखि १२ हप्ताको अवधि दोस्रो मात्रा लगाउँदा प्रभावकारी हुने निर्णय गरेको थियो ।
सेजको निर्णय आउनु पूर्व नै नेपालमा २८ दिनको फरकमा खोप लगाउने निर्णय गरिएको भएपनि सेजको निर्णय आईसकेपछि मन्त्रालयले सोही अनुरुप निर्णय गर्न उपयुक्त हुने समितिले सुझाव दिएको छ ।
खोपको पहिलो मात्रा लगाउँदा देखिने प्रतिअसरको तुलनामा दोस्रो मात्रा लगाउँदा कम देखिने खोप शाखाका प्रमुख डा. गौतमले बताए ।
खोप समितिले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सल्लाहकार समितिको प्रस्ताव स्वीकृत भने गरिसकेको छैन ।
आजबाट कोरोना विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुँदै, ६५ वर्ष माथिका नागरिकले मात्र लिन पाउनेछन् खोप